Maxaad Kala Socotaa Carwada Buugaagta Ee Muqdisho Book Fair? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Maxaad Kala Socotaa Carwada Buugaagta Ee Muqdisho Book Fair?
Maxaad Kala Socotaa Carwada Buugaagta Ee Muqdisho Book Fair?
Sannadkii saddex-aad oo xiriir ah ayeey dadka Soomaaliyeed maanta u tahay maalin wayn, maadaama Muqdisho ay marti gelineyso carwada buugaagta ee Muqdisho Book Fair.
Aqoonyahanno, Qoraayaal, siyaasiyiin, dhiiro geliyayaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reyidka ayaa iskugu tagay hotel Royal Palace, Ex City Palace, waxaana dhammaan dadkaas ay u hammuun qabaan in ay ka qayb galaan Carwada Buugaagta oo Saakay Muqdisho ka furmatay.
Maxamed Diini oo ah aas aasaha carwadan ayaa dhawr jeer oo horey sheegay in ay tahay in lagu doonayo in lagu soo gaba gabeeyo oraahdii xumeyd ee Soomaalida la hubay oo ahayd “Soomaali waa bulsho hadal, ee ma ahan bulsho qoraal”.
kummanaan qofood ayaa saakay u durreeray goobta ay carwada ka dhacayso, waxaana ay soconeysaa saddex maalin oo soo aaddan, sida ay sheegeen qaar kamid ah hawl wadeennada carawadaas.
Axmed Faarax Idaajaa ayaa kamid ah kuwa ugu magaca wayn ee sannadkan kasoo muuqanaya, waxaana uu Idaajaa sidoo kale ka qayb galay labadii sanno ee kahoreysay.
Garaad Yoonis Gajoome oo kamid ah dhallinyarada buugaagta ay qoreen saakay loogu soo bandhigayo carwada buugaagta Muqdisho ayaa kal hore inoo sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay ka qayb galkiisa, wuxuuna sidoo kale carabka uu ku dhuftay in middan u gogol xaareyso isku furanka Muqdisho iyo Hargeysa maadaama uu isaga halkaas ka yimid.
Si kastaba ha ahaatee waan idin soo gudbin doonaa waxbadan oo kusaabsan bandhiggaas caalamiga ah ee sannadkii hal jeer Muqdisho ka dhaca.